Nbudata Seabird Seeker SB7L-360A Serie 2 FSX & P3D - Rikoooo
-Agụnye a zuru set nke mbụ gauges, ukwuu zuru ezu photorealistic 2D kokpiiti, a n'ụzọ zuru ezu arụ orụ VC na ise agba atụmatụ. Flight Ọnọdụ ndị dị ịrịba ama ezi ihe na-eme ka ụgbọelu a obi ụtọ ofufe. E nwere a zuru ọrụ ntuziaka esịne ke Seabird achọ SB7L Documentation folder.
The Seabird achọ bụ a ìhè chọpụtara ugbo elu wuru Seabird Aviation Australia Pty Ltd nke Australia na Seabird Aviation Jordan. The ụlọ ọrụ ahịa na ugbo elu dị ka a ala na-eri ọzọ ka chọpụtara helicopters, n'ihi na ndị agha na ndi nkiti na ndi. Ọrụ na ụlọ ọrụ ahịa na ugbo elu maka agụnye pipeline nnyocha, n'ụsọ oké osimiri nche, gburugburu ebe obibi ọrụ, si efe n'elu foto na obi iru ala. The ụgbọelu na kwadoro site na a Lycoming O-360 engine.
The Seabird achọ nwere ụfọdụ mbupụ ihe ịga nke ọma, na-wara site ọhụrụ (post 2003 mbuso agha) Iraqi Air Force.
Onye edemede: Darrel Woodhouse